NASSAT | I-Intanethi ye-Intanethi ye-Aviation General - Ixabiso eliphantsi
I-NASSAT ye-Intanethi ye-Intanethi | I-intanethi ngeSelula kunye neeSatellite eziseTekethi
Ithemputha ye-Intanethi - Iinkampani ze-Pymes Security Telemetry.
Ithempyutheni ye-Intanethi yeenqwelo ezincinane, ii-Helicopter kunye ne-Ultralight
I-aircraft jikelele yenye yeendidi ezibini zenkampani yokuhamba. Ukubhekisa kuzo zonke iindiza ezingabandakanywa kwimibutho yezemidlalo kunye nezoshishino zorhwebo rhoqo.
Iindiza zeenqwelo-moya eziqhelekileyo zivela kwi-gliders kunye ne-paramotors kwiinqwelo ezihamba ngeenqwelo eziqhelekileyo. Ngenxa yoko, ezininzi zeenqwelo zeenqwelo zehlabathi ziwela kule nqanaba kwaye ezininzi iinqwelo-moya zehlabathi zikhonza kuphela i-aircraft jikelele.
EUnited States kukho ii-airport ze-17.300 ze-airports, ezingekho ngaphaya kweenqwelo-moya ezingamakhulu amathathu zilawulwa yi-ATC yendawo; Izikhumulo zee-600 kuphela ziqhutyelwa ngorhwebo lwezothutho lwezothutho eziqhelekileyo, ezinye zikhonza kuphela kwi-aircraft jikelele.
Ngokutsho Association of labaqhubi kunye Aircraft Abanini (AOPA) Aviation jikelele US ubonelela ngaphezulu kwe 1 ekhulwini US GDP, ivelisa imisebenzi ezizigidi 1,3 iimveliso kunye neenkonzo zobungcali. Kwilizwe ezifana Colombia imele Aviation jikelele 75% of zoPhapho.
Aviation jikelele iquka uluhlu olude zosetyenziso, ezifana eyama ezemidlalo, ultralight, ingakumbi corporate, umthwalo non-ezicwangcisiweyo, iteksi umoya, umoya yezigulana, izikolo moya, iindibano zocweyo eyama loLwamkelo, ufoto lwasemoyeni, ukuhlangulwa, zokucima imililo, ezolimo kunye nabanye.
I-NASSAT AIR Basic isisombululo esise-satellite esikuvumela ukuba usebenzise i-laptop yakho, i-PDA okanye i-SmartPhone ukuze ungene ngemvume ngokukhuselekileyo kwinkonzo yakho yenkampani, qhagamshelana ne-SkyVector, udlulise idatha kwaye uthumele / ufumane i-imeyili.
Ingasetyenziselwa ukukhwela kwi-intanethi okanye ukwenza iifowuni kuphela. I-NASSAT AIR Basic iyi-satellite-or-art isevisi ye-satellites ephantsi-e-art eyenzelwe ukunikezela ngeenkonzo zezwi kunye nedatha kwi-bhodi kwii-bhodi nakwii-intanethi kuyo yonke into enayo kwi-ofisi yakho, ekhaya okanye kwiziko lolawulo.
Ngokhetho, ithuba lokusasaza kweenqwelo zeenqwelo zakho ziyafumaneka.